Vaovao - Ny marika fanaka ivelany dia manafaingana ny hafaingan'ny firafitry ny orinasa
Miaraka amin'ny famerenana ny toekarena makro sy ny fiakaran'ny tahan'ny fidirana amin'ny e-varotra dia lasa malaza be ny tsena fanaka ivelany ao Shina. Ny tatitra fanaraha-maso vao haingana navoakan'ny Ivotoerana fikarohana momba ny fanondranana entana any Shina dia mampiseho fa tamin'ny tapany voalohan'ity taona ity, ny habetsahan'ny fifanakalozam-bola amin'ny sandan'ny fanondranana any Shina dia betsaka lavitra noho ny tamin'ny taona lasa
Nahasarika ny sain'ireo goavambe goavambe eran-tany ny sehatry ny vola mihaja amin'ny tsena fanaka ivelany any Sina. Nanafaingana ny hafainganam-pandaminana ao Shina ireo goavambe iraisampirenena ireo, ary tsy misy ankanavaka ny latabatra mivalona ivelany.
Mihamaro hatrany ny olona toy ny latabatra mora aforeto, mampiasa azy io tena sarotra. Saika ny familers rehetra dia manana latabatra aforitra toa ny vokatra avy amin'ny orinasa. latabatra sy seza.
Amin'ity taona ity dia mividy milina bobongolo miisa 3 izahay ary manakarama mpamorona zokiolona 2 hanatevin-daharana ny ekipa fampandrosoana. Ka izao dia nampitombo ny fahafahan'ny famokarana 50% raha oharina amin'ny taloha
Matokia ny latabatra sy ny seza plastika vaovao hamidy haingana